Home Wararka Afduubka Soomaalida ku nool Kenya oo sii kordhaya iyo walaac la...
Waxaa maainba Maalinta ka danbeeysa sii kordhaya Walwalka iyo Walaaca Soomaalida ku nool dalka Kenya kaas oo dalka ku haya afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed iyadoo weli aan weli xaaladooda laga warheyn gabdho la afduubtay.
Waxaa dalka kenya lagu afduubay ama lagu qafaalau Gabdhaha tiradoodu gaareysaa illaa afar halka mid ka mid ah gabdhahaasna la helay xalay kadib markii ay ka soo baxsatay kooxdii afduubatay.
Sida ay sheegtay Mid kamid ah gabdhaha la afduubtay ee dib loo helay taas oo lagu magacaabo Hibo Faarax waxa la waydiistay lacag madax furasho ah la bixiyay hase yeeshee Hibo aabaheed ayaa beeniyay in madax furasho la bixiyay balse gabadheeda ay ka soo baxsatay kooxda afduubka u geysatay.
Najo Cabdulaahi oo ka mid ahayd gabdhaha la afduubtay ayaa meydkeeda la helay. Xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto Kamukunji ayaa sheegay in maalmihii dambe ay soo bateen tacadiyadda ka dhanka ah gabdhaha Soomaalida.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowlada Kenya oo ku saabsan sidii ay wax uga qaban lahaayeen falkan afduubka ah oo cabsida ku beeray dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Previous articleDhaawaca Saney Cabdulle oo loo diiday Dowladda Federaalka
Next articleSomalia & Itoobiya oo heshiis cusub kala saxiixday!
Khilaafka Turkiga & RW Kheyre oo meel xun gaaray & ciidamo...
[Vidoe] Wiil Soomaali ah oo aay Burcad ku dishay magaalada Istanbuul